Oxiracetam အတွေ့အကြုံ - Oxiracetam အမှုန့်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ခံစားရစေသနည်း။
Oxiracetam သည် nootropic အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဖြည့်စွက် အဆိုပါ racetam မိသားစုကနေ။ ၎င်းသည် piracetam နှင့် aniracetam ပြီးနောက်တတိယ racetam ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ Oxiracetam သည်ဓာတုပစ္စည်းမှဆင်းသက်လာသော piretetam ဖြစ်သည်။
အခြား racetams များကဲ့သို့ပင် oxiracetam သည် pyrrolidone ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော် oxiracetam တွင် hydroxyl group ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏မိခင်၏ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သော piracetam ထက်ပိုမိုအားကောင်းစေသည်။
၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လေ့လာမှုစသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေရန်စွမ်းရည်နှင့်၎င်းမှလှုံ့ဆော်ပေးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်လူသိများသည်။ Oxiracetam nootropics သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်မြှင့်တင်ပေးသည်။
Oxiracetam အမှုန့် - Oxiracetam ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
သုတေသီများမှတင်ပြသော oxiracetam ၏ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုမှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများတွင်မျှဝေထားသော oxiracetam အတွေ့အကြုံများရှိသည်။
Oxiracetam သည်အခြားသော racetam များနည်းတူ၊ တိုတိုနှင့်ကာလရှည်မှတ်ဉာဏ်များဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သိမှတ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သူမည်သူမဆိုအသုံးပြုသည်။ စာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်ရန်လိုအပ်သောကျောင်းသားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ စာမေးပွဲများကိုလွယ်လွယ်ကူကူသင်ယူရန်နှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရာတွင်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်ပိုမိုကြာရှည်သောကာလကိုအာရုံစိုက်ရန်ကူညီသည်။
Oxiracetam အသုံးပြုသည် သင်၏စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်လှုံ့ဆော်နေစဉ်၎င်းသည်သိမှုတိုးမြှင့်မှုကိုပေးသောကြောင့်ထူးခြားသည်။ ၎င်း၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာအခြားလှုံ့ဆော်သူနှင့်မတူဘဲခံစားမှုတစ်ခုအားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော Oxiracetam သည်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးသင့်ကိုအေးဆေးငြိမ်သက်မှုရှိစေနိုင်သည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သောအလုပ်သမားများအတွက် oxiracetam အတွေ့အကြုံသည်ယုံမှားဖွယ်မရှိချေ။
သုတေသနအရ Oxiracetam သည်အာရုံခံကာကွယ်မှု ပေး၍ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိလူနာများမှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းခြင်းအပါအဝင်သိမြင်မှုကျဆင်းမှုကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်တစ်ယောက်ကအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်စမတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ Oxiracetam သည်လူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်များကိုဆင်းသက်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ပြီးပြည့်စုံသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုရန်အထောက်အကူပြုသည့်နှုတ်ဖြင့်သက်သောင့်သက်သာရှိစေသည်။
Oxiracetam အမှုန့် ထို့အပြင်များအတွက် option တစ်ခုဖြစ်သည် မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်အောင် မကြာခဏမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းခံစားနေရသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည် oxiracetam ကိုသူတို့ဘာသာမထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် Oxiracetam အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းရန်အတွက် oxiracetam သည်ယုံကြည်ရသောရောင်းချသူများထံမှ ၀ ယ်ယူရန်သင်သေချာပေါက်စဉ်းစားလိမ့်မည်။ ?????
လူ့သုတေသနအများစုသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အခြေခံအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် oxiracetam အသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုရန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ oxiracetam ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်ကျန်းမာသောလူငယ်များအတွက် oxiracetam ၏အလားအလာကိုပြသည်။
Oxiracetam အကျိုးကျေးဇူးများကိုလူသိများသော်လည်း၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရှင်းလင်းစွာမသတ်မှတ်ရသေးပါ။ သို့သော်များစွာသော oxiracetam လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံများကိုသတင်းပို့သည်။
အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်သည် oxiracetam ယန္တရားများဖြစ်သည်။
i. neurotransmitter, acetylcholine ကိုထိန်းညှိသည်
ဤရွေ့ကား neurotransmitter နှစ်ခုသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၊ သင်ယူမှုနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်သည်။
Oxiracetam သည် cholinergic နှင့် glutamate system များကိုလွှမ်းမိုးခြင်းဖြင့်ဤအရေးပါသော neurotransmitter များ၊ acetylcholine ACh နှင့် glutamate တို့ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
အထူးသဖြင့်, oxiracetam acetylcholine receptors ၏ sensitivity ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ၎င်းသည် M1 acetylcholine receptors ကိုလွှမ်းမိုးသော protein kinase C (PKC) အင်ဇိုင်းကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Oxiracetam nootropic သည်ပျက်စီးနေသော receptors များအားပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြထားခြင်းဖြင့်သိ့ံသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ACh အဆင့်မြင့်မှုကိုသေချာစေသည်။
ii ။ စိတ် - လှုံ့ဆော်ဂုဏ်သတ္တိများ
Oxiracetam nootropics သည်ဗဟို ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုအနည်းငယ်လှုံ့ဆော်စေသောသက်ရောက်မှုများကိုပေးသည်။
Oxiracetam သည် ampakine မိသားစုပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ Ampakine ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသသည်။ ampakine သည် glutamatergic AMPA receptors များကိုလွှမ်းမိုးသောဆေးများဖြစ်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ကဖိန်းကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်သူများနှင့်မတူဘဲသင့်အားအိပ်မောကျစေခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းများရှိစေသည့် ampakine သည်သင့်အားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမဖြစ်စေပါ။
ထို့ကြောင့် Oxiracetam သည်စိတ်နှင့်ခန္တာကိုယ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စေပြီးလှုံ့ဆော်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
ထို့အပြင် oxiracetam သည်စွမ်းအင်မြင့်မားစေသည့်စွမ်းအင်မြင့်ဖော့စဖိတ်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် အာရုံတိုးမြှင့်.
iii ။ အဆိုပါအချိုမှုစနစ်က Modulate
Oxiracetam သည်အချိုမှုစနစ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြီး၊ အလှည့်အနေဖြင့် neurotransmitter, glutamate ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုသြဇာညောင်းသည်။ ဒါဟာပိုပြီးအစွမ်းထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့ပေးထားပါတယ်။
Glutamate သည်အာရုံကြောစနစ်တွင်အပေါများဆုံး neurotransmitter တစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးသို့အချက်ပြပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
အချိုမှုသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီးမှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူမှုတို့တွင်ပိုမိုပါဝင်သည်။
လေ့လာမှုအချို့အရ oxiracetam သည် hippocampus ရှိအာရုံခံဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Hippocampus သည်မှတ်ဥာဏ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုလွှမ်းမိုးသော ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
Oxiracetam သည်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိသည်။ တစ်ခုမှာ D-aspartic acid ကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအနေဖြင့် lipid ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Lipid ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကအာရုံခံဆဲလ်တွေလည်ပတ်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်။
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) မှအတည်ပြုချက်မရရှိသော်လည်းအိုစီရာရာအက်တမ်အကျိုးခံစားခွင့်များစွာရှိသည်။
အောက်ကများမှာ oxiracetam အကျိုးခံစားခွင့်;
Oxiracetam သည်အလွန်ရေပမ်းစားသောကြောင့်၎င်းကိုမှတ်ဥာဏ်တိုးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်အသစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးစိတ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်လည်ပတ်စေပြီးမြန်ဆန်စေသည်။
Oxiracetam သည်အာရုံခံဆဲလ်ပျက်စီးမှုကိုသက်သာစေခြင်း၊ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ lipid ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် astrocyte ၏ activation ကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်လည်းမှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
ဦး နှောက်inရိယာတွင်သွေးစီးဆင်းမှုသည်မှတ်ဥာဏ်အပါအ ၀ င် ဦး နှောက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် ဦး နှောက်သို့လုံလောက်သောအောက်စီဂျင်ရရှိစေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ထို့အပြင် oxidative stress သည်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အကယ်၍ မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်အာရုံကြောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Oxiracetam ဖြည့်စွက် အာရုံခံဆဲလ်တွေကိုပျက်စီးစေခြင်းအားဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးကိုလာပါ။
နောက်ထပ်, oxiracetam အဆိုပါ hippocampus အတွက် glutamate နှင့် aspartic အက်ဆစ်ထုတ်လွှတ်တိုးလာကြောင့်ဖြစ်ကောင်းရေရှည်အလားအလာတိုးတက်စေရန်အကြံပြုသည်။
သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းမှုရှိသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ ၆၀ ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်နေ့စဉ် ၄၀ မီလီဂရမ်ပါသော oxiracetam သောက်သုံးမှုသည်သိပ္ပံနည်းကျကျဆင်းခြင်း၏လက္ခဏာများကိုလျှော့ချနေစဉ်မှတ်ဥာဏ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
စိတ်ရောဂါရှိသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ (၄၀) ၏အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရနေ့စဉ် ၂,၄၀၀ မီလီဂရမ်ဖြင့် oxiracetam သည်ရေတိုတိုးတက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မှတ်ဉာဏ် အဖြစ်ကောင်းစွာနှုတ် fluency ။
ii ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်
အချိန်ကြာမြင့်စွာအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရသောအခါ oxiracetam သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ Oxiracetam ဝက်ဘဝသည် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိဖြစ်ပြီးကြာရှည်စွာအကျိုးရှိနိုင်သည်။
Oxiracetam သည်အလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာအာရုံစိုက်နိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ Oxiracetam သည် ဦး နှောက်တွင်းရှိစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောကြောင့်ကြာရှည်စွာအလုပ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်အသစ်သောအရာများကိုအလွယ်တကူလေ့လာရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်ကိုပေးသည်။
Oxiracetam သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲအာရုံစူးစိုက်ရန်သင့်အားကူညီသည်။
လူ့စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုတွင်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုရှိသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၉၆ ဦး နှင့်အခြား ၄၃ ဦး တွင်ဉာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုရှိသူ ၄၃ ဦး ပါ ၀ င်သော Oxiracetam ဖြည့်စွက်ဆေးသည်တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
iii ။ အာရုံကြောဆိုးကျိုးများ
ဦး နှောက်ဒဏ်ရာကြောင့်ပင် ဦး နှောက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့်သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်းများကိုကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် Oxiracetam ဖြည့်စွက်ချက်သည်အာရုံကြောကာကွယ်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် Oxiracetam သည် ဦး နှောက်အားအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုရောဂါများကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာအရ oxiracetam သည် ဦး နှောက်အားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန် neurotoxins များကိုမိတ်ဆက်ပေးသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် oxiracetam နှင့်ကြိုတင်ကုသမှုသည် neurotoxicity ကိုကာကွယ်ရန်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထပ်မံလေ့လာမှုများအရ oxiracetam ကိုအလွန်ကုသပြီးနောက်သွေးကြောအတားအဆီးကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်ကြွက်များကို isheme stroke မှကာကွယ်ပေးသည်။
သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောလူနာ ၁၄၀ ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သွေးတိုးရောဂါ), oxiracetam တစ်လျှောက်တွင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် တွင် nerve growth factor (NGF) ။ ဒီကုသမှုက ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပြီးရှင်သန်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုနောက်ထပ်အစီရင်ခံခဲ့သည် ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုအပြီးပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်သည့်ကြွက်သားစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
Oxiracetam သည်မြင်နိုင်စွမ်း၊ အနံ့၊ ထိတွေ့မှု၊ ကြားနိုင်မှုနှင့်အရသာတို့ကိုခံစားနိုင်သောအရာငါးခုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အရာရာကိုရူမြင်ပုံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
သင် oxiracetam ကိုယူသောအခါ ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးစေသည်၊ ၎င်းသည်စိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိနိုင်ပြီးစုစည်းနိုင်စေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရိပ်မိသောအရာကိုအနက်ဖွင့်နိုင်သည်။
Oxiracetam သည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ကိုပြပြီးနှုတ်နှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိစေသည်။ နှုတ်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုခြင်းသည်သင်၏မှတ်ဥာဏ်မှအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကူညီသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၇၃ ယောက်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဘက်ပေါင်းစုံစိတ်ဖောက်ပြန်မှု (MID) သို့မဟုတ်မူလဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည့်စိတ်ဖောက်ပြန်မှု (PDD) မှ oxiracetam သည်သိမြင်မှုအားကျဆင်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့၏စကားလုံးကျွမ်းကျင်မှုကိုပါတိုးတက်စေခဲ့သည်။
vi ။ နိုးနိုးကြားကြားတိုးပွားစေ
နိုးကြားနေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းကအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် Oxiracetam သည် ဦး နှောက်အတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်နူးညံ့သောလှုံ့ဆော်မှုကိုပေးသည်။
စိတ်ရောဂါခံစားနေရသူ ၂၈၉ ယောက်ကိုလေ့လာမှုတွင် oxiracetam သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုများကိုလျော့နည်းစေ။ နိုးနိုးကြားကြားရှိစေရန်လည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Oxiracetam အမှုန့် - ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရအကြံပြုထားသည့် oxiracetam ပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၇၅၀ မှ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ Oxiracetam သောက်သုံးသောပမာဏကိုနံနက်စောစောနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းအစောပိုင်းတွင်နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးသည်။
ညနေခင်းတွင် oxiracetam ဖြည့်စွက်ဆေးကိုမသောက်သင့်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအိပ်ချိန်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်ပျော့ပျောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
oxiracetam သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောကြောင့်အစားအစာနှင့်မပါဘဲတက်ဘလက်၊ ဆေးတောင့် (သို့) အမှုန့်ပုံစံဖြင့်သောက်နိုင်သည်။
သုသေသနပြုချက်အရ oxiracetam သည်သွေးရည်ကြည်အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် ၁-၃ နာရီခန့်ကြာပြီး၎င်းကိုသင်ယူခြင်းလှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ထားသောအလုပ်မလုပ်မီတစ်နာရီအကြာတွင်ယူသင့်သည်။ oxiracetam ဝက်ဘဝသည် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးရောက်ရန်သင်မျှော်လင့်သင့်သည်။
အချို့သောလေ့လာမှုများကနေ့စဉ်မြင့်မားသော oxiracetam သောက်သုံးသောပမာဏကို ၂,၄၀၀ မီလီဂရမ်အထိအသုံးပြုသော်လည်းလိုအပ်သည်အတိုင်းအထက်သို့တက်သည့်အနိမ့်ဆုံးသောက်သုံးသောပမာဏမှစတင်ပါ။
ထို့အပြင် oxiracetam သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်၎င်းကိုကောင်းမွန်သော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ stack လုပ်ရန်သေချာပါစေ။ alpha GPC သို့မဟုတ် CDP ကိုလိုနီ။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အတွင်း၌ choline မလုံလောက်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့် oxiracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအထူးသဖြင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
Oxracetam nootropic သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှလုံခြုံပြီးကောင်းစွာသည်းခံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။
သို့သော်အချို့သော oxiracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ၊
ခေါင်းကိုက်ခြင်း - Oxiracetam ကိုကောင်းတဲ့ choline အရင်းအမြစ်တစ်ခုနဲ့ stack လုပ်ဖို့မေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဦး နှောက်ထဲတွင်မလုံမလောက်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ Alpha GPC ကဲ့သို့သော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ oxiracetam stack ယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်ခြင်းတို့သည်အလွန်ရှားပါးသော oxiracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် oxiracetam ပမာဏကိုမြင့်မားစွာသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ညနေပိုင်းတွင်ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုသောက်သုံးသည့်အခါ၎င်းတို့သည်အစီရင်ခံသည်။ ဤ Oxiracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုတွန်းလှန်ရန်အတွက်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောဆေးသောက်ပြီးနေ့ခင်းပိုင်းမတိုင်မှီအိပ်စက်ခြင်းပြruptionနာကိုရှောင်ရန် oxiracetam ကိုသောက်ပါ။
အချို့သောအခြားအလားအလာရှိသော oxiracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် -
Oxiracetam အကြံဥာဏ် stacks
Oxiracetam အမှုန့်သည်သိပ္ပံပညာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုတစ် ဦး တည်းဖြစ်စေ၊ အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်ဖြစ်စေပေါင်းစပ်သည်။
-oxiracetam အာလဖ GPC stack
အခြား racetams ကဲ့သို့ပင် Oxiracetam သည် choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူအလွန်အရေးကြီးသည်။ Alpha GPC ဖြင့် Stack လုပ်ခြင်းသည်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမြင့်မားစေရုံသာမက ဦး နှောက်တွင်းရှိကိုလိုနီလိုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီပေးသည်။
Oxiracetam alpha GPC stack dosage ပမာဏသည် ၇၅ မီလီဂရမ်မီလီဂရမ်နှင့်နံနက်ခင်းနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင်ဆေးနှစ်မျိုးဖြင့်သောက်သုံးသည်။
Noopept သည်သိပ္ပံပညာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် racetams နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်အကောင်းဆုံး nootropics များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်နှင့်အတူ oxiracetam stack အခါ noopept, သင်အပါအဝင်ပိုပြီးသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ့ကြုံခံစားရန်မျှော်လင့်ထား, မှတ်ဉာဏ်သင်ယူခြင်း၊ နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်း၊
ဒီ stack အတွက်ပုံမှန်ဆေးထိုးပမာဏမှာ 750 mg oxiracetam နှင့် 10-30 mg noopept ဖြစ်သည်။
oxiracetam stack -unifiram
Unifiram သည်သိပ္ပံပညာတိုးပွားစေရန်နှင့်ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံသည် racetams နှင့်ဆင်တူသော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေချို့တဲ့နေကြသည်နှင့်ဤကြောင့်၎င်းနှင့်အတူကောင်းစွာ stack မယ်လို့အဘယ်အရာကိုပြောပြရန်ခက်ခဲစေသည်။
သို့သော် ထပ်မံ၍ ၎င်းသည် racetams နှင့်ဆင်တူသည်ဖြစ်သောကြောင့် oxiracetam အပါအဝင် racetams နှင့်အတူ unifiram သည် ထပ်မံ၍ သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာ racetams ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ဖြစ်ညွှန်ပြနေသည်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်ဤအရပ်မှအလွန်နိမ့်ဆေးများလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ unifiram နှင့် oxiracetam အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ သောက်သုံးသောဆေးသည် 5-10 mg unifiram နှင့် 750 မီလီဂရမ်မီလီဂရမ်မီလီဂရမ်သောက်သင့်သည်။
-Oxiracetam နှင့် Pramiracetam ပုံ
Oxiracetam သည်အခြား racetams များကိုကောင်းစွာပုံထားသည်။
သင်နှင့်အတူ oxiracetam stack ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ pramiracetamမှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုတို့ကသိမှုစွမ်းရည်မြင့်မားပြီးသင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလည်းတိုးလာနိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တိုးတက်မှုကြောင့် oxiracetam ၏ပျော့ပျောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးသည်။
ဤအိတ်အတွက်အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောပမာဏမှာ ၇၇ မီလီဂရမ်မီလီဂရမ်နှင့် pramiracetam ၃၀၀ မီလီဂရမ်တို့ကိုနေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ Oxiracetam သည်အစာအိမ်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ပြီးရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောအချိန်တွင် pramiracetam သည်ပထမအစာတွင်ပါဝင်ပြီးအဆီပျော်ဝင်နိုင်သောဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။
အဘယ်မှာရှိ oxiracetam ဝယ်ဖို့
Oxiracetam nootropic ကိုအွန်လိုင်းတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ သင် oxiracetam ကိုယူရန်စဉ်းစားလျှင်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံး nootropic ရောင်းချသူများထံမှ ၀ ယ်ပါ။ ကမ်းလှမ်းထားသည့် oxiracetam အမှုန့်၊ ဆေးတောင့်များသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍ ဂရုတစိုက်လေ့လာရန်စဉ်းစားပါ။
ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မျှဝေထားသော oxiracetam အတွေ့အကြုံများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရရှိရန်အာမခံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောင်းချသူများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Oxiracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်အကောင်းဆုံး oxiracetam nootropics ၏မျက်လုံးဖွင့်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Dysken, MW, Katz, R. , Stallone, အက်ဖ်, & Kuskowski, အမ် (1989) ။ Multi-infarct စိတ်ဖောက်ပြန်နှင့်မူလတန်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာစိတ်ဖောက်ပြန်၏ကုသမှုတွင် Oxiracetam ။ neuropsychiatry နှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 1(3), 249-252 ။
Hlinák Z ကို, Krejcíဗြဲ (2005) ။ Oxiracetam သည်ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်တွင်ကုသမှုမခံယူမီတွင်ကြွက်များတွင် trimethyltin နှင့်ထုတ်လုပ်သည့်လူမှုအသိအမှတ်ပြုမှုလိုအပ်ချက်ကိုတားဆီးခဲ့သည်။
Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, He S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. (2017) ။ S-oxiracetam သည်ကြွက်များအားလေဖြတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များအတွင်း၌ ဦး နှောက်အတားအဆီးကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသက်သာစေသည်။
Maina, G. အ, Fiori, L. , Torta, R. , Fagiani, MB, Ravizza, L. , Bonavita, အီး, Ghiazza, B. , Teruzzi, အက်ဖ်, Zagnoni, PG, & Ferrario, အီး (1989) ) ။ Double-blind, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ - ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှု: မူလတန်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာခြင်းနှင့် Multi-infarct စိတ်ဖောက်ပြန်၏ကုသမှုတွင် Oxiracetam ။ Neuropsychobiology, 21(3), 141-145 ။
Rozzini R ကို, Zanetti အို, Bianchetti အေ (1992) ။ မူလတန်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာစိတ်ဖောက်ပြန်.Acta Neurol (Napoli) မှအလယ်တန်းသိမြင်မှုချို့တဲ့၏ကုသမှုအတွက် oxiracetam ကုထုံး၏ထိရောက်မှု။
Sun က, Y. , Xu, ခ, & Zhang က, ဆိုးကျိုး (2018) ။ Hypertensive Cerebral Hemorrhage ကိုကုသရာတွင် Oxiracetam နှင့်ပေါင်းစပ်အာရုံကြောကြီးထွားမှုအချက်။ ပါကစ္စတန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံဂျာနယ်, 34(1), 73-77 ။
၁။ Oxiracetam ဆိုတာဘာလဲ။
2.Oxiracetam အမှုန့် - Oxiracetam ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
5.Oxiracetam အမှုန့် - ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ။
7.Oxiracetam အကြံဥာဏ် Stacks